कृषिमन्त्री भन्छन्- पतञ्जलीको भन्दा डीडीसीको घ्यु गुणस्तरीय ! - Prawas Khabar
२ वर्षमा देशलाई दालभात तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना
१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ साल वैशाख १ गते रारातालको किनाराबाट देशबासीलाई गरेको सम्बोधनमा भनेका थिए-एकजना नेपाली पनि भोकै मरेमा सबै नेपालीले खान पाएका छन् भन्न सकिन्न । ओलीको यो भनाइ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेपछि कानुनसरह भएको छ ।
कुन-कुन चिजमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो त ?
बिचौलियाले बाहिरबाट आयात गरेर बेच्ने र हाम्रा किसानको उत्पादन सडाउने खेल खेल्दा रहेछन् । फलफूलमा पनि यस्ता माफियाहरुले थलो बनाएका छन्, जसले स्वदेशमा उत्पादन भएका हाम्रा फलफूल छिर्नै दिँदैनन् । हाम्रा सप्तरीका किसान बजार नपाएर बसे, बिचौलियाले लखनउबाट आँप ल्याएर बजार कब्जा गरेको छ
मुख्य कुरा त स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने नीति चाहियो । दोस्रो कुरा, उपभोक्ताले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । राज्यले स्वदेशी उत्पादन कुन हो भन्ने ब्राण्डिङ गरिदिन्छ
हामी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनौं तर भन्सार चाहिँ सिधा सिधा बनाइदिने हो । अरु केही गर्न सकिन्न । उताबाट आउने आँपको भन्सार बढाइदिएपछि हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ । सिधा सिधा यही हो कुरा